Filipina: Didim-pitondrana mitaky taratasim-panafody raha hividy fimailo · Global Voices teny Malagasy
Filipina: Didim-pitondrana mitaky taratasim-panafody raha hividy fimailo
Voadika ny 03 Marsa 2011 4:33 GMT
Ny adihevitra nateraky ny volavolan-dàlana momba ny Fahasalaman'ny Fananahana dia mahaliana kokoa raha toa ka tsy lazaina hoe lasa dihy hafahafa, ny farany teamin'izany dia ny (didim-pitondrana) nolanian'ilay tanàna kely nandray dingana vaovao.
Tsy ny tanànanareo na barangay any Filipina no niavian'ilay didim-pitondrana niteraka adihevitra fa avy amin'ny tanàna kely iray, ao Ayala Alabang -izay toerana malaza fa itoeran'ny mpanao politika, ny Filoha taloha, ny olo malaza sy ny mpanankarena.
Ny didim-pitondrana momba ny fimailo vaovao avy amin'ny tanàna Ayala Alabang izay iadian-kevitra. Sarin'i Flickr nampiasa robertelyov (06/11/10).
Ny didim-pitondranan‘ilay tanàna dia mitondra ny lohateny hoe , “Fandaharana mitsinjo ny fiarovana ny zaza ao am-bohoka ao amin'ny farintanin'i Barangay Ayala-Alabang; ary nametraka sazy raha misy ny fandikana izany na amin'ny tanjona hafa aza.” Nolaniana izy io tamin'ny 3 Janoary 2011.
Raha fintinina, dia mametraka famerana amin'ny fivarotana sy fizarana ny fitaovana miaro amin'ny vohoka tsy niriana izay milaza ny etiketiny fa maha-afa-jaza , ary koa mitaky ny mponina mba hanana taratasy avy amin'ny dokotera raha hividy izany ao an-tanàna.
Tokony hahazo ny fanohanan'ireo manohitra ny didim-pitondrana ny volavolan-dalàna momba ny Fahasalaman'ny Fananahana, saingy ho an'ireo mponina ao an-tanàna Ayala Alabang – dia foto-kevitra manokana azy ireo izany- ary ny feon'ireo vahoaka dia manohana izany didim-pitondrana izany sady namoaka fihetsika mahaliana mahakasika izany izy ireo.
Ny mponina ao amin'ny tanànan'i Ayala Alabang sy ny mpihira malaza iray Lea Salonga dia naneho ny tsy fankàtoavany ny didim-pitondrana:
Raha namaky ny didim-pitondrana aho dia tena tezitra tokoa. Zo momba ny inona, atao lalàna ve sa zavatra hafa, misy olona hafa, na barangay miaraka ve, dia mampiasa izany samirery ao amin'ny efitrano? Tsy misy mahaloa-bava raha toa ka miresaka momba ny fananahana izaho sy ny vadiko, na koa hoe inona ny fitaovam-piarovana ho ampiasainay na tsy ho ampiasainay. Tsy tiako ny milaza izay zavatra ataoko, amin'ny ankapobeny…indrindra raha mahakasika ny fiainako manokana tahaka izao.
Nandà ny politikan’ ny didim-pitondrana izay ao am-pon'ireo tanana ny Vincenton Post :
Ny teny hoe “ arovy ny ain'ny reny sy ny zaza ao an-kibo hatrany am-piandohana ” dia fihatsaram-belatsihy tanteraka! Tsy misy “ny zaza ao an-kibo ” voaharo raha toa ka mbola hiresaka ny fampiasana fitaovam-piarovana isika. Ny fiarovana ny singa tsy misy dia tsy firaharahiana ireo izay misy. Izy ireo no misy, mivelona, miaina mba ho voaaro voalohany amin'ny areti-mifindra azo avy amin'ny firaisana ara nofo ary indrindra ny vohoka tsy niriana.
Nampatsiahy i Jam fa raha ny tena izy , dia mora ny fivezivezen'ny didim-pitsarana :
Izaho mieritreritra fa ity didy ity dia tsy ilaina. Tahaka ny hoe toerana mitokana i Brgy. Ayala Alabang. Afaka mividy fimailo any amin'ny mpivarotra ireo olona na aiza na aiza.
Mpandray anjara ao amin'ny ThePhillipines.PH dia nahita ny fitarihan'ny fiangonana katolika mahefa amin'ny fampanekena ny didim-pitondrana:
Hita ny tara-kevitra sisan'ny fiangonana katolika izay nitady voalohany nanaiky sy nampanan-kery ny didy araka ny hevitry ny sekretera misahana ny fahasalamana teo aloha Dr. Carmencita N. Reodric. Ho an'ny tanànan'i Ayala Alabang, ny didim-pitondran'izy ireo dia efa lany andro ka tsy azo ampiarina intsony raha eo amin'ny tontolon'ny saina vaovao mivelatra demokratika Kanefa ahoana no nanekena azy raha toa ka efa lany andro ny tetikasa? Misy zavatra tsy mazava ao; ny fiangonana katolika dia tena maharesy lahatra tokoa ireo kristianina mpanakarena ao Filipina.
Nitondra indray ny adihevitra momba ny volavolan-dalàna momba ny Fahasalaman'ny Fananahana i Ramatoa Imelda mba hijery hoe manao ahoana ny filan-kevitra ao Ayala Alabang :
Mikasika io volavolan-dalàna momba ny Fahasalaman'ny Fananahana io daholo ny resaka,izay araka ny hevitro dia tokony ho laniana. Raha miteny izy ireo hoe tsy manana zo hampiroborobo ny fampiasana ny fimailo ny fanjakana , dia tokony tsy manana zo hanakivy sy handrara izany koa izy. Manampy sy mampianatra ny olona amin'ny safidiny ny volavolan-dalànaa, ary mba hanatanteraka ny safidiny izay tiany, izay no andraikitry ny fanjakana.
Fanampin'ireo resaka ny momba ny lalàna henjana, ny lalam-panorenana sy ny andraikitry ny fanjakana , nametraka fanontaniana vitsivitsy i Kiks izay olona vitsy no sahy manontany:
Amin'izany vaovao izany, raha tsy misy ny didim-pitondrana iraisam-pirenena mangataka ny mpividy mba hampiseho taratasy avy amin'ny dokotera alohan'ny hividianana fimailo na fitaovam-piarovana hafa, tanànan'ny famokarana amin'ny fitiavana sahaza ve i Barangay Ayala-Alabang ankehitriny?
Tonga tany Grika ve?
Nahatonga adihevitra be ny didim-pitondrana , nanjary lasa lohahevitra malaza i Ayala Alabang tao amin'y Twitter taorian'ny ora nivoahan'ny vaovao.
oliboycastro: Tsy misy mpivarotra rongony intsony ao n Ayala Alabang, fa ny fimailo ihany sisa no amidy.
Minna—♥: Nankany Filipina aho ny fotoana manaraka, natomboko ny fitadiavam-bola amin'ny varotra fimailo tao Brgy Ayala Alabang.
janvynator: Ireo olona tsy manaiky ny didim-pitondrana vaovao tao Ayala Alabang, atsangano ny filahianareo. Oadray! ny tanana no tiko ambara. :))
SagadaSun: Lasa faneson'izao tontolo izao ny filan-kevitra Barangay ao Ayala Alabang's Barangay tsy hoe noho ny hadalan'izy ireo fa noho ny FAHAMATORANY. #rhbill
Araka ny voasoratra, ny filan-kevitry ny tanàna dia nampiato ny fampiharanana didim-pitondrana niaraka tamin'ny mpitondra ny tanàna Ayala Alabang fa mety ho voasazy raha mbola mikiry ny hampihatra ihany.
Nampiasaina tamin'ny Flickr pejin'ny Paul Keller fahazoan-dalàna CC Fanolorana 2.0 Generic (CC BY 2.0)